Ebe nchekwa ihe nchọgharị Microsoft Edge - LinuxCapable
Microsoft Edge Nchọgharị
Otu esi etinye Microsoft Edge na AlmaLinux 8
Sunday, Jenụwarị 16, 2022 by Jọshụa James
Site na ndabara, ndị ọrụ AlmaLinux nwere naanị ihe nchọgharị ịntanetị Firefox. Agbanyeghị, enwere ike itinye ọtụtụ ụzọ ọzọ. Microsoft Edge bụ otu ụzọ ọzọ na-emepe emepe kemgbe ihe karịrị otu afọ ma na-enweta ọtụtụ nyocha dị mma n'etiti ọtụtụ obodo nkesa Linux yana ikekwe ọzọ ma e jiri ya tụnyere naanị…
Categories AlmaLinux Tags AlmaLinux 8, Microsoft Edge Nchọgharị
Otu esi etinye Microsoft Edge na CentOS 9 Stream
Thursday, January 13, 2022 Saturday, December 11, 2021 by Jọshụa James
Site na ndabara, ndị ọrụ CentOS nwere naanị ihe nchọgharị ịntanetị Firefox. Agbanyeghị, enwere ike itinye ọtụtụ ụzọ ọzọ. Microsoft Edge bụ otu ụzọ ọzọ na-emepe emepe kemgbe ihe karịrị otu afọ ma na-enweta ọtụtụ nyocha dị mma n'etiti ọtụtụ obodo nkesa Linux yana ikekwe…
Categories CentOS iyi Tags CentOS Stream 9, Microsoft Edge Nchọgharị
Otu esi etinye ihe nchọgharị Microsoft Edge na openSUSE Leap 15
Tọzdee, Disemba 28, 2021 Satọdee, Nọvemba 13, 2021 by Jọshụa James
Ndị ọrụ openSUSE ugbu a, na ndabara, bụ naanị ihe nchọgharị ịntanetị Firefox. Agbanyeghị, enwere ike itinye ọtụtụ ụzọ ọzọ. Microsoft Edge bụ otu ụzọ ọzọ na-emepe emepe kemgbe ihe karịrị otu afọ ma na-enweta ọtụtụ nyocha dị mma n'etiti ọtụtụ obodo nkesa Linux na ikekwe…
Categories openSUSE Tags Microsoft Edge Nchọgharị, megheSUSE Leap 15
Thursday, January 13, 2022 Tọzdee, Ọktoba 7, 2021 by Jọshụa James
Ndị ọrụ Fedora ugbu a, na ndabara, bụ naanị ihe nchọgharị ịntanetị Firefox. Agbanyeghị, enwere ike itinye ọtụtụ ụzọ ọzọ. Microsoft Edge bụ otu ụzọ ọzọ na-emepe emepe kemgbe ihe karịrị otu afọ ma na-enweta ọtụtụ nyocha dị mma n'etiti ọtụtụ obodo nkesa Linux na ikekwe…
Categories Fedora Tags Fedora 34, Microsoft Edge Nchọgharị
Otu esi etinye Microsoft Edge na Linux Mint 20
Thursday, January 13, 2022 Wednesday, September 15, 2021 by Jọshụa James
Ndị ọrụ Linux Mint ugbu a, na ndabara, bụ naanị ihe nchọgharị ịntanetị Firefox. Agbanyeghị, enwere ike itinye ọtụtụ ụzọ ọzọ. Microsoft Edge bụ otu ụzọ ọzọ na-emepe emepe kemgbe ihe karịrị otu afọ ma na-enweta ọtụtụ nyocha dị mma n'etiti ọtụtụ obodo nkesa Linux yana ikekwe ọzọ…
Categories Mint Linux Tags Mint 20 Mint Linux, Microsoft Edge Nchọgharị
Otu esi etinye Microsoft Edge na Debian 11
Thursday, January 13, 2022 Sundaybọchị Sọnde, Ọgọstụ 22, 2021 by Jọshụa James
Ndị ọrụ Debian 11 Bullseye ugbu a, na ndabara, bụ naanị ihe nchọgharị ịntanetị Firefox. Agbanyeghị, enwere ike itinye ọtụtụ ụzọ ọzọ. Microsoft Edge bụ ụzọ ọzọ na-emepe emepe kemgbe ihe karịrị otu afọ ma na-enweta ọtụtụ nyocha dị mma n'etiti ọtụtụ obodo nkesa Linux…
Categories Debian Tags Nnenna 11 Bullseye, Microsoft Edge Nchọgharị
Thursday, January 13, 2022 Thursday, August 12, 2021 by Jọshụa James
Ndị ọrụ Rocky Linux 8 ugbu a, na ndabara, bụ naanị ihe nchọgharị ịntanetị Firefox. Agbanyeghị, enwere ike itinye ọtụtụ ụzọ ọzọ. Microsoft Edge bụ ụzọ ọzọ na-emepe emepe kemgbe ihe karịrị otu afọ ma na-enweta ọtụtụ nyocha dị mma n'etiti ọtụtụ obodo nkesa Linux…
Categories Nkume linux Tags Microsoft Edge Nchọgharị, Nkume Linux 8
Otu esi etinye Microsoft Edge na Ubuntu 20.04
Thursday, January 13, 2022 Friday, May 21, 2021 by Jọshụa James
Ndị ọrụ Ubuntu ugbu a, na ndabara, bụ naanị ihe nchọgharị ịntanetị Firefox. Agbanyeghị, enwere ike itinye ọtụtụ ụzọ ọzọ. Microsoft Edge bụ otu ụzọ ọzọ na-emepe emepe kemgbe ihe karịrị otu afọ ma na-enweta ọtụtụ nyocha dị mma n'etiti ọtụtụ obodo nkesa Linux yana ikekwe ọzọ ma e jiri ya tụnyere…
Categories Ubuntu Tags Microsoft Edge Nchọgharị, Ubuntu 20.04 LTS Focal Fossa